Iindaba - Sihlala sikhusela le "mile yokugqibela"!
E-Indonesia, ilizwe elaziwa njenge "lizwe elinamawaka alishumi eziqithi", i-XCMG yokujikeleza iirobhothi, ii-rigs ezithe tyaba zokomba kunye nezinye iimveliso zinesabelo sentengiso esiphezulu kwimarike yalapha, kodwa zichithakele kwiziqithi eziphantse zili-10. Iindawo zokwakha zangaphandle ubukhulu becala ziyasendle kwaye ziyasendle, kunye nemozulu eshushu, iimvula ezingena ngesiquphe kunye nezinye iimeko zemozulu ezizodwa, kwaye iimeko zendlela zixakile nangakumbi.
Ngaphantsi kweemeko ezinzima, amalungu eqela leenkonzo ezisisiseko zeXCMG ebemisiwe kuludwe kwaye bebehambisa ulwakhiwo lwaseIndonesia ngaphezulu kweminyaka emibini. Okwangoku, iyanceda ekwakhiweni kwezixhobo kwiprojekthi kaloliwe ohamba ngesantya esiphezulu eJakarta-Bandung.
Iprojekhti kaloliwe ohamba ngesantya esiphezulu yiJakarta-Bandung “ngumyalelo wokuqala” wenkqubo kaloliwe yaseTshayina ehamba ngesantya esiphezulu, zonke izinto, kunye nemveliso egcweleyo yokuya phesheya. Ikwayiprojekthi ephawulekayo yelinge le- “Belt and Road”. Ijakarta-Bandung Isantya esiphezulu sikaloliwe sidibanisa ikomkhulu laseIndonesia iJakarta kunye nedolophu yabakhenkethi eyaziwayo iBandung. Kulindeleke ukuba ivule ukugcwala kwabantu ngo-2021 kwaye iya kuba ngumgaqo kaloliwe wokuqala onesantya esiphezulu kuMazantsi mpuma eAsia xa igqityiwe.
Lo mgaqo kaloliwe ohamba ngesantya esiphezulu awupheleli nje ekuphuculeni ezoqoqosho nezentlalo e-Indonesia, kodwa ikwasisahluko esitsha sobambiswano lobuhlobo esibhalwe ngumbilo ngabakhi base China. Okwangoku, ulwakhiwo lomgaqo kaloliwe ohamba ngesantya esiphezulu wase Yawan sele luza kugqitywa, kwaye ukwakhiwa kwesiseko seXCMG yokumba izixhobo ezijikelezayo ziya kungena kwindawo yokugqibela. Nangona kunjalo, ngenxa yeemeko zengingqi ezinzima, umntu kufuneka abambelele ngaphambili ukukhusela "imayile yokugqibela" ngexesha loMnyhadala weNtwasahlobo.
XCMG iinjineli inkonzo esisiseko Shi Xiangbei kunye Wang Jianzhong wathabatha inyathelo lokucela Ying ukuba athathe lo msebenzi. Shi Xiangbei uthe:
Ndinamava atyebileyo ekusingatheni iimeko zikaxakeka kwaye ndiphathe izixhobo ezininzi zokuhlangula izixhobo. I-Jakarta-Bandung Isantya esiphezulu soololiwe yiprojekthi enkulu e-Indonesia, enefuthe elikhulu ekutshintsheni ukuthuthwa kwempahla yangasemva kunye nokuma kweemveliso ze-XCMG. Ndimele ndihlale ukuze ndiqiniseke ukuba akukho nto ihamba gwenxa!
Kwimishini yokuhlangula izixhobo, uShi Xiangbei uthathe amandla kunye nomyalelo kwindawo ngenxa yokuphatha nzima kwaye kuyingozi yengozi, ekhokelela kuyo yonke imishini yokuhlangula. Kodwa kwangaxeshanye, iimoto ezimbini ezintsha zafika kwenye indawo yokwakha kwaye zazidinga ukudityaniswa kwangoko.
Ukuze kungachaphazeli inkqubela phambili yomabini amaqela, ngelixa besenza umsebenzi weengcinga kumthengi, waququzelela bonke abasebenzi ukuba bahlangule emini kwaye balayishe imoto ebusuku. Emva kweentsuku ezintathu nobusuku bokulwa okuqhubekayo, umsebenzi wokuhlangula kunye nokudibanisa imoto entsha wagqitywa ngempumelelo.
Ngexesha lobhubhane, basebaninzi abasebenzi beenkonzo zentengiso abanamathela kwaye balwe kumgca wangaphambili phesheya kolwandle!
Kungenxa yokuba bayakhathala ngeXCMG kunye nabathengi ukuba baya kuzithemba ngakumbi kwaye bazimisele xa iiprojekthi zaseTshayina ziphuma kwaye izixhobo zaseTshayina ziphuma!